'हामी गाँजाबाट एक वर्षमै अर्बौ/खर्बौ आम्दानी गर्न सक्छौँ' | एक्सप्रेस | GNN Nepal GNN Nepal 'हामी गाँजाबाट एक वर्षमै अर्बौ/खर्बौ आम्दानी गर्न सक्छौँ' | एक्सप्रेस | GNN Nepal
किसानले आफ्नो खेतमा हिजो जति आम्दानी गर्थ्यो अब एकै सिजनमा गाँजाबाट उसले १५ गुणा बढी आम्दानी गर्न सक्छ : भीम उपाध्याय
हामी खाली गाँजा गाँजा भन्छौं खासमा गाँजा के हो ?
गाँजा एक प्रकारको वनस्पति हो । यसको उपयोग अमृतसरह छ । यो स्वास्थ्य उपचार र उद्योगका लागि सबैभन्दा उपयोगी र लाभकारी नगदेबाली हो ।
नगदेबाली कसरी भयो ?
यसमा थुप्रै पैसा छ । यसबाट हामी एकै वर्षमा अर्बौ/खर्बौ आम्दानी गर्न सक्छौं । यो कहिल्यै बिग्रिदैन । पानी, असिना परेर नष्ट भयो भने पनि यो धेरै काम लाग्छ । यसको फल अत्यन्तै लाभदायी हुन्छ । यसको फलको रोटी खान सकिन्छ, तेल बनाएर खान सकिन्छ । अचार बनाएर खान सकिन्छ, पौष्टिक आहार बनाएर घरपालुवा जनावरहरुलाई खुवाउन सकिन्छ । यसबाट हवाइजहाजदेखि घर, मोटरसाइकल, जुत्ता, चप्पल, तेल सबथोक बन्छ । नेपालजस्तो देशलाई महादेवले कालो सुनका रुपमा गाँजा दिएको हो ।
४ दशक अघि हामी गाँजाबाट धेरै आम्दानी गर्थ्यौ । त्यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र गाँजामै आधारित थियो । त्यसयता हामीले यसलाई अवैध समूहमा राखेपछि गरिब किसानका छोराछोरीहरु जेलमा छन् र उनीहरुको आयआर्जनको स्रोत नै खोसिएको छ । खेती गर्न सिँचाइ चाहिन्छ, मल चाहिन्छ र जोत्नु, खन्नु पनि पर्छ । तर गाँजालाई केहीपनि गर्नुपर्दैन । यो प्राकृतिक वनस्पति भएको हुनाले छर्दिनासाथ फैलिन थाल्छ । हाम्रो प्रकृतिमा सबै बालीहरु आकाशको पानीबाटै फैलाउन पर्याप्त छ ।
गाँजा अर्थतन्त्रको एक खम्बा नै हो । अर्थतन्त्रमा पैसा कमाउने योभन्दा अर्को कुनै पक्ष छैन। अहिलेको पर्यटनमा खासै केही छैन । विदेशमा नेपालीहरुले मजदुरी नगर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्था छ । देश जम्मै रेमिट्यान्सले चलेको छ । पहिले चप्पल लगाउने नेताहरु अहिले करोडौंका गाडीहरु चढ्छन् । उनीहरु अहिले सडकमा हिँड्नै नसक्ने भए ।
गाँजा लागुपदार्थ हो, अफिम हो र रक्सी हो । यसको सेवन गरेपछि मात लाग्छ र यसले समाजलाई विकृतितर्फ उन्मुख गराउँछ । यो कुरा हामीले किन नबुझेको ?
कुन चिज धेरै खायो भने नोक्सान गर्दैन ? शरीरलाई हामीले तेल हालेको हो । तेल चाहिनेभन्दा बढी हालेर काम लाग्छ ? अफिम पीडानाशक हो । यसको कडा औषधि हुन्छ र महँगो पनि हुन्छ । रक्सी मान्छेले तनावबाट मुक्त हुन सेवन गरेपनि यसबाट वर्षेनी मृत्यु हुनेको संख्या उच्च छ । नेपालमा चुरोटबाट वार्षिक ६ हजार मान्छेहरुको मृत्यु हुने गरेको छ । गाँजाबाट कोही मान्छे मर्दैन । यसले लट्ठ बनाउँछ तर हानी, नोक्सानी कहिल्यै हुँदैन । यसको सेवन गर्नेहरुले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध गर्ने हिम्मत गर्दैन । गाँजा खाने समाज निकै शान्त हुन्छ । यसको सेवनबाट कुनै पनि देशमा अपराध आधा घटेका छन् । नेदरल्यान्डमा यसको सेवन अत्याधिक हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ जेल नै छैनन् किनभने त्यहाँ अपराध नै हुँदैन ।
मानिसले कुनै न कुनै रुपमा नशा सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ । कसैले चुरोट खान्छ, कसैले सेकुवा बढी खान्छ, कसैले रक्सी खान्छ । मानिस मानसिक रुपले जब तनावमा जान्छ उसले नशा खोज्छ । तनावमा फसिसकेपछि ऊ त्यसबाट मुक्ति खोज्न थाल्छ । यसबाट बच्न डाक्टरले दिने औषधि कति खानु ? त्यो त रसायनिक चिज हो । दशौं वर्ष पहिलेदेखि बिरामी भएको बेला मानिसहरुले गाँजा सेवन गर्दै आएका छन् । यहीँ नजिकै भारतका गाउँगाउँमा गाँजा उत्पादन हुन्छ । अपराध भएपनि आपसमा मिलेर समाधान गरिन्छन् ।
हाम्रो देशमा गाँजा प्रतिबन्धित छ । यो लागुपदार्थ हो, यसलाई फुकुवा गर्नुहुँदैन भन्ने माग पनि छ नि त !
प्रतिबन्धित त छ । यो विश्वभरि पनि प्रतिबन्धित नै थियो । अहिले विश्वका ३५ देशले यसमा लागेको प्रतिबन्ध हटाइसकेका छन् । अमेरिकाको लगभग सबै राज्यमा गाँजा वैध भइसकेको छ । यसलगायत क्यानडा, मेक्सिको, उरुग्वे, अस्ट्रेलिया र भारतमा यो वैध भइसक्यो । नेपालले पनि गाँजा लागुऔषध होइन तर यो कडा औषधि हो भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा मत दायर गरिसकेको छ । यसलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न मात्र बाँकी छ ।
गाँजासम्बन्धी ल्याइएको विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ…
त्यो त निजी हो । यसलाई सरकारले लिएर आउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा मत जाहेर गरेर पारित भइसक्यो । अनि यसलाई किन ढिला गरेको ? बाटोमा अलिअलि गाँजा ओसारपसार गर्ने गरिबहरु अहिले जेलमा छन् । अमेरिकामा गाँजा वैध भइसकेपछि करिब ६५ प्रतिशत जेलमा रहेका नागरिक सबै रिहा हुने भएका छन् । उनीहरुलाई सरकारले क्षतिपूर्तिसहित रोजगारी दिने विधेयक पारित भइसकेको छ ।
विश्वमा सबैभन्दा पहिले खेती गर्ने वनस्पति भनेको गाँजा हो । गाँजाबाटै सबैभन्दा पहिले बाइबल लेखिएको हो । अमेरिकामा ‘स्वतन्त्रताको घोषणा गर्ने कागज’ पनि गाँजाबाटै लेखिएको हो । अमेरिकाको ह्वाइट हाउसमा सधैँ गाँजाको खेती हुन्थ्यो । पछि चुरोट र रक्सीका व्यापारीहरुले गाँजा यसरी खुला भएको देखाए । यसको सेवनबाट मानिसहरु स्वस्थ हुने भए । अब चुरोट, रक्सी र औषधि नबिक्ने भए । किनभने कोही पनि बिरामी हुने भएनन् । भएभरका औषधिहरुले काम गर्न नसकेपछि गाँजालाई नै औषधिका रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । यसबाट उद्योग सञ्चालन हुने, मनोरञ्जन हुने र औषधि पनि हुने भएकाले यसको लागि क्रान्ति सुरु भएको छ ।
यसको प्रत्यक्ष लाभ क-कसले लिन्छन् ?
गरिब किसानले । उसले आफ्नो खेतमा हिजो जति आम्दानी गर्थ्यो अब एकै सिजनमा गाँजाबाट उसले १५ गुणा बढी आम्दानी गर्न सक्छ । जस्तो कसैले पहिले कुनै खेती गरेर २५ हजार आम्दानी गर्थ्यो भने अब गाँजा खेतीबाट उसले यसको १५ गुणा बढी आम्दानी गर्न सक्छ । त्यो पनि नगद । गाँजा निर्यात गर्न त गाह्रो हुन्छ तर त्यसबाट बनेका सामग्रीहरु निर्यात गर्न सकिन्छ । गाँजा विशुद्ध अर्गानिक हो । व्यवसाय गर्नेहरुले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिन्छन् । उनीहरुले यसको व्यापार गरेबापत पैसा कमाउँछन् त्यसमा सरकारले कर लगाउँछ । त्यसबाट संकलन भएको अर्बौ आम्दानीले सरकारलाई पनि लाभ मिल्छ । त्यो फेरि देशकै विकासमा काम लाग्छ ।
अमेरिकाको न्युयोर्कमा गाँजाबाट भएको आम्दानीलाई २० प्रतिशत गाँजाको व्यवस्थापन गर्न र ८० प्रतिशत आम्दानी शिक्षा, स्वास्थ्य र छात्रवृत्तिमा खर्च गर्ने भनेर कोष नै खडा गरिएको छ । यसको खेती देशका सबै ठाउँमा हुन्छ । जहाँ गरेपनि हुन्छ । यसलाई सामुदायिक वनहरुमा पनि रोप्न सकिन्छ । यसबाट समुदायलाई फाइदा हुन्छ । निर्यात गरेर विदेशी डलर कमाउन सकियो । व्यापारीहरुलाई जति कर लगाएपनि भयो । सरकारले यसबाटै अर्बौ रुपैया कर लगाउन सक्छ । यसबाट संकलन भएको रुपैयालाई शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सकियो । खेतीलाई आधुनिक तरिकाले पनि गर्न मिल्यो । त्यसपछि यसका उद्योगहरु खुल्छन् ।
औषधि बनाएर निर्यात गर्न सकियो । कपडाहरु बनाएर निर्यात गर्न मिल्यो । यी सबै गर्न सकियो भने पैसाको समस्या नै आउँदैन । त्यसपछि गरिबको घरमा १५ गुणा पैसा आम्दानी हुन्छ । उनीहरुका बालबालिकाले राम्रो शिक्षा हाँसिल गर्छन्, राम्रो लगाउँछन् । त्यसपछि वर्षमा एक लाख कमाउन परदेश जानु पर्दैन । आफ्नो परिवासँग बस्न पाइन्छ । गाउँमा विकासको केन्द्र भएर जान्छ । त्यसपछि गाउँमा कुनै कुराको अभाव हुँदैन । गाउँमा उद्योगहरु खुलिसकेपछि रोजगारीको अवसर हुन्छ । मान्छेहरु सहरबाट गाउँतिर जान थाल्छन् । विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरु खुल्छन् । त्यसपछि आम्दानी नै आम्दानी ।
हरेक चिजमा कानुन उल्लंघन हुन सक्छ । यसमा पनि चोरी हुन सक्छ । त्यसका लागि सुरक्षा आवश्यक छ । त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ । अब हामी गाँजालाई आयात होइन निर्यात गर्छौ । अन्य खेतीका लागि मलदेखि कीटनाशक औषधिहरु आयात गर्नुपर्छ तर यसमा त्यो लागु हुँदैन । सुरुमा प्राकृतिक रुपमा गाँजा खेती गर्नेहरुले बिस्तारै आधुनिक तरिकाबाट खेती गर्ने तरिका सिक्छन् । त्यसपछि सरकारले यातायात, भन्सार लगायतका क्षेत्रमा करको भार थप्नु परेन । यत्रो ठुलो काम नगरेर कोसँग भिख मागेर बसिरहेको ? कसैले अनुदान देला भनेर पीडा किन लिएको ? नेपालबाट जाबो एक डेढ लाख पैसा कमाउन विदेशमा मान्छेले सबै त्यागेर कस्तो जुनी बाँचेको ?
गाँजालाई वैध भन्नुको मतलब बजारमा गाँजा किनेर खान पाउने भनेको होइन । सम्बन्धित ठाउँबाट जे कामका लागि अनुमति लिएको छ त्यही काम गर्नुपर्छ । गाँजाको खेती गर्ने हो कि ? औषधि बनाउने हो कि ? त्यसको मात्र काम गर्नुपर्छ । झाडीमा फालाफाल पाइने गाँजालाई बजारमा कसले पैसा हालेर खान्छ ? हामीले यसलाई महाऔषधि मानेका छौं । हाम्रो शरीरमा जति तत्वहरु छन् ती सबै तत्वहरु कुनै वनस्पतिमा छन् भने त्यो गाँजामा पाइन्छ । यसमा ४ सयजति तत्वहरु पाइन्छ । यो एकदमै बहुमुल्य छ ।
पहिलेपहिले गाँजाको कागज बनाएर किन लेखिन्थ्यो रु त्यसमा हजारौं वर्षसम्म किरा लाग्दैन । गाँजाको कपडा लगाइयो भने कुनै पनि जीवाणुले आक्रमण गर्न सक्दैन । मैले त अबका दिनमा कोरोनाको उपचार पनि गाँजाबाटै हुने सम्भावना देखिरहेको छु ।
प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सक दिव्या सिंह शाहलाई कोरोना पुष्टि